YC-170-1 Cookies Cutie Iceonic mandeha ho azy tsara indrindra mpamokatra masinina Cookies mpanamboatra sy orinasa | Yucheng
Milina Cookie miolakolaka
Masinina baolina trondro
Masinina baolina daty
Masinina lohataona mihodina
Masinina Bun vita amin'ny stuffed
Andalana famokarana cookie
Ligne famokarana milina mandeha ho azy feno lohataona
YC-170 Masinina mofomamy Crystal Moon Cake
YC-170-1 Cookies Ultraonic Cookies Cutter gilasy ...
YC-168 Machine Proteinina mandeha ho azy
YC-170-1 Cookies Ultraonic Cookies Cutter gilasy Masinina Cookies
YC-170-1 Automatic Ultraonic Cookies Cutter Ice Cookies Machine dia misy milina Encrusting, ultrasonic cutter ary tray mampitohy milina, afaka mamokatra cookies boaty misy ranomandry tsy misy mangatsiaka izy io, malama ny tampony, ary mety indrindra ho an'ny cookies voanjo, afaka manapaka mivantana tsy misy mivaingana, manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
YC-170-1 Cookies Ultraonic Cookies Cutter misy gilasy Ice Machine dia miasa miaraka amin'ny cutter ultrasonic izay afaka manamboatra cookies boaty ranomandry bebe kokoa toy ny cookies panda, cookies Penguin, cookies miendrika fo, cookies mosaic, cookies mofomamy sns.
Dimention amin'ny masinina 1200x800x1300mm
Antsy amin'ny sakan'ny 200mm
fahafahana 20-120pcs / min
Ny milina fanapahana ultrasonic dia natao ho an'ny fikolokoloana sakafo miaraka amin'ny hafainganam-pandeha antsy 110 isa-minitra, marina 1 mm.
Ny haben'ny vokatra notapatapahina dia azo ahitsy arakaraka ny tena toetran'ny famokarana, ary ny fanapahana izay azo idirana ao amin'ny rafitry ny solosaina mialoha. Izy io koa dia azo antsoina amin'ny alàlan'ny interface fanaraha-maso ny efijery.
Ny solomaso ultrasonika dia afaka nifandray tamin'ny extruder nisesy teo aloha, ary afaka nanapaka ny vokatra tsy tapaka, ary avo ny fahombiazan'ny fanapahana.
Aorian'izany dia azo ampifandraisina amin'ny masinin-fonosana izy io, ary ny automatique dia afaka mandeha ho azy.
1. 20-120pcs / min, 1.5time haingana kokoa noho ny masinina mitovy amin'izany.
2. Fahadisoana ny vokatra tsirairay ao anatin'ny 1g, ary hanananay ny fanatsarana isan-taona.
3. Mora ny miasa ny masinina, azonao atao ny miatrika ny masinina amin'ny fiofanana mandritra ny adiny 3.
4. Ireo singa elektrika rehetra dia mandray ny vahaolana tokana omen'ny DELTA, toy ny PLC, invertor.
5. Afaka tadidin'ny masinina ilay fomba fahandro, mila manitsy ny masontsivana indray mandeha fotsiny ho an'ny vokatra tokana.
6. Azo alaina amin'ny sakafo isan-karazany, ao anatin'izany ny mofo, mofo burger, mofo feno, mofo varimbazaha manontolo, sns.
7. Natao ho an'ny orinasa izy io.
8. Ny fitaovana dia mampiasa SUS304, karazana kilasy sakafo.
9. Mora ny manala ny ampahany, ary mila manadio fotoana kely ny fanadiovana ny milina.
Ity milina fanadiovana ultrasonic ity ho an'ny sakafo dia azo ampiharina amin'ny sakafo fanaovana mofo (mofo, mofo, pizza, sandwich, sns.) Izay miendrika boribory, mahitsizoro, telozoro, sns. Mba hahatratrarana ny vokatra fanapahana tsara indrindra.
Izahay dia mamolavola sy mamokatra fitaovana ultrasonic izay amidinay ho toy ny singa feno na fivondronan'ny tsirairay toy ny mpanamboatra sy mpanova. Ireo mpanjifanay sy ireo mpanamboatra milina manana tanjona kendrena manokana dia mahazo tombony amin'ireo singa sy milina avo lenta miaraka amina hetsika tsotra sy mora ampiasain'ny mpampiasa. Manolo-tena izahay hanome vahaolana izay afaka mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifanay, manome ny haitao farany, na amin'ny vokatra na amin'ny fizotra.
Ny endri-tsarin'ny milina fanapahana ultrasonika:
1. Mahatratra fako kely kokoa sy vokatra lehibe
2. Fahadiovana, mora diovina
3. Milamina sy milamina ny faritra voapaika, tsy miraikitra, ary tsy miloko ireo vokatra misy sosona marobe.
4. Rafitra manan-tsaina, tsotra sy miasa, fanovana mora foana ny vokatra marobe.
5. Rehefa vita ny fametrahana dia manomboka ny bokotra iray, manapaka mandeha ho azy.
6. Ny loharanom-pahalalana mandeha ho azy manenjika loharanom-pahefana mitondra fiara ultrasonika dia manara-maso ny fahita matetika amin'ny antsy ultrasonika amin'ny fotoana tena izy, ary ny antsy fanapahana ultrasonika dia miasa amin'ny fanjakana milamina, izay mety amin'ny asa mitohy mandritra ny fotoana maharitra.
Raha liana amin'ny mofomamy vita amin'ny sôkôla vita amin'ny sôkôla ianao, tongasoa izahay hividy ny fitaovana manokana miaraka amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy matihanina any Shina. Ny kalitao ambony, ny fampisehoana azo antoka ary ny vidin'ny fifaninanana dia azo antoka.
Teo aloha: YC-168 Machine Proteinina mandeha ho azy
Manaraka: YC-170 Masinina mofomamy Crystal Moon Cake
Masinina Cookies boaty gilasy
milina cookie mofomamy
milina cookie ultrasonic
YC-170 Masinina Cookies mameno malefaka
Ny orinasanay dia manana ekipa teknika matihanina. Ny injeniera dia manana traikefa 20 taona mahery.
Adiresy: Trano # 17, No.68, Zhong Chuang Road, Songjiang, Shanghai, Sina.